साँचै हलमा ताला लाग्छ ? के ग​र्दैछ​न् हलवाला ? - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
साँचै हलमा ताला लाग्छ ? के ग​र्दैछ​न् हलवाला ?
समीर बलामी /फिल्मी फण्डा । आउँदो श्रावण १ बाट बक्स अफिसलाई चुस्त दुरुस्तसँग लगाउनबाट आनाकानी गर्ने हलमा ताला लगाउने भएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा र चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशब भट्टराईले हलमा ताला लाग्ने कुरा प्राय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भनिरहेका छन् । दुई बर्षको पिरियडमा पनि बक्स अफिस लगाउन आनाकानी गरे ताला लगाउनुको विकल्प नभएको मन्त्री बाँस्कोटा बताउँछन् ।
सरकारले नीतिगत रुपमै बक्स अफिस लगाउने भनेर बजेट खर्च गरिसकेको छ । हलवालाहरुले केही स्वार्थ राखेर बक्स अफिसलाई प्रभावमा पार्न खोजे स्वभाविक रुपमा हलमा ताला लगाउन मन्त्रालयबाटै निर्देशन गर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले फिल्मी फण्डालाई बताए । गत श्रावण १ गतेदेखि उपत्यकामा बक्स अफिस जडान गरेको हो । १ बर्ष बितिसक्दा पनि बक्स अफिस लागेको निर्माताहरुलाई आभास भईरहेको छैन ।
बक्स अफिस, वितरक र हलबाट आउने हिसाव तीन किसिमको रहेको छ । यसले बक्स अफिसलाई ई–टिकेटिङ मात्रै भनुपर्ने बाध्यता भएको छ । अब श्रावण १ बाट बक्स अफिसलाई बक्स अफिस प्रक्रियाकै सिष्टमसँग लिंक गरेर रियल डाटा नपठाएसम्म बक्स अफिस लागेको भन्न सकिन्न । यसको लागि श्रवाण १ बाट सरकारले कडाई गर्न लागेको हो ।
श्रावण १ बाट पनि यसमा आनाकानी भए त्यस्तो हलमा ताला बन्द गर्ने बोर्डले जनाएको हो । यसको लागि बोर्डले कार्यविधि बनाइसकेको छ । केही कुराहरु अझै छलफल मा रहेको बताईएको छ । श्रावण १ सम्म मोफसलका हलहरुमा बक्स अफिस जडान हुनेछ । काठमाडौको धेरै कलेक्सन गर्ने धेरै हलहरुको डाटा अन फेयर भएको स्रोतहरु ब्ढिरहेको छ । यसको लागि आर्थिक हिनामिना हुँदा आर्थिक ऐन लागे जसरी बोर्डले पनि आवश्यक प्रावधान सहित ऐन ल्याउने बताईएको छ । ऐन अनुसार ठुला हलहरुमा ताला लाग्नेछन् ।
‘अहिलेको बक्स अफिस डाटा रियल टाइम छ । हलहरुले पनि आफ्नो सफ्टवयर राख्न सक्नुहुन्छ । तर, त्यो केन्द्रीय सर्भरमा जोडिनुपर्छ । अहिलेका बक्स अफिस शतप्रतिशत चाहेको जस्तो बक्स अफिस हो । हाम्रो नीति होइन यो राज्यको नीति हो ।’ बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईले फिल्मी फण्डासँग भने ।
नयाँ कार्यविधि आए पछि हलको सबै जानकारी प्राप्त हुने बताईएको छ । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने इन्जिजियर, आन्तरिक राजस्वका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधी र पत्रकार लगायतका टिमको अनुगमन समिति पनि बोर्डले गठन गर्ने भएको छ । समितिले कारबाहि गर्नुपर्ने खण्डमा तत्काल कारबाहि गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्नेछ । र समाचार सम्प्रेषण पनि त्यहिबाट तत्काल हुने जनाएको छ ।